Sida loo doorto mootada mootada iibka hagaha iibsiga | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn blog News Sida loo doorto baaskiil motori ku iibinta tusaha iibka
Taariikhda ： 2020-08-26 Qeybaha ：News Muuqaalada ： 2,207 aragti
Baaskiil koronto ayaa u noqda gaadiid weyn dad aad iyo aad u badan inta lagu jiro COVID-19, kana dheereeya baaskiil dhaqameedka, kana badbaado badan gaadiidka dadweynaha. Uma baahnid inaad si gaar ah u heshid meel baabuurta la dhigto, tusaale ahaan, haddii aad iibsato baaskiil isku laaban oo laalaaban, gabi ahaanba wuu isku laaban karaa oo wuxuu dhigi karaa xafiiskaaga. Sababtoo ah Baaskiilada baabuurta waxay leeyihiin noocyo badan, waxaa laga yaabaa in qof idinka mid ahi had iyo jeer ku adkaato inuu go'aan gaadho ka hor intaanu iibsan baaskiil wadista. Marka xigta waxaan xushay dhowr arrimood oo aad ku baari karto go'aanka si markaas ay kuugu sahlanaato inaad hesho baaskiilada elektaroonigga ah.
Maxaad ugu baahan tahay baaskiil wadista baabuurta?
Waa su'aal muhiim ah maxaad ku qaban doontaa baaskiil koronto ku shaqeeya. Dadku waxay adeegsanayaan baaskiilada elektaroonigga ah ujeeddooyin kala duwan. Marka loo barbardhigo baaskiilka caadiga ah, mootada mootada leh waxay leedahay matoor koronto, batariga iyo nidaamka xakamaynta korantada. Faa'iidada ugu muhiimsan ee isticmaalka korantada baaskiilku waa in kuwani ay yihiin kuwo deegaanka u habboon, oo aan u keenin wax wasakh ah deegaanka. Baaskiilada elektaroonigga ah ee ugu fiican ayaa ah hab gaadiid ku habboon oo loogu talagalay in lagu daboolo masaafooyinka gaaban si dhakhso leh. Markaa dadka qaar waxay adeegsanayaan koronto koronto si ay shaqadooda ugu dhammeeyaan waqtigii loogu talagalay, tusaale ahaan, xawaaraha degdegga ah. Waxay waqtigooda ku badbaadiyaan iyagoo si fudud ugu safraya baaskiiladooda korontada agagaaraha meelaha deriska ah. Haddii aad qorsheyneyso inaad jimicsi sameysid jirkaaga oo aad gubto kalooriyada qaar, habka caawinta baydalka iyo habka baydalka labaduba waa xulashada ugu fiican.
Immisa ayuu le'eg yahay baaskiil wadista baabuurta? Nooc kasta oo baaskiil koronto leh wuxuu leeyahay miisaan kala duwan. Si fiican ayaa loo hubiyaa culeyskooda iyadoo la adeegsanayo qeexitaanka soo-saaraha. Hadalka guud, miisaanka farqi weyn uma dhaxeeyo. Iyada oo ku saleysan qaabka baaskiilka, mootada, batteriga iyo noocyada baaskiil, nooc kasta oo ugu fiican e-baaskiilada kaladuwan ee qaybaha ayaa kala duwanaan doona, waxaa jira noocyo badan oo ka bilaabma kuwa ugu culus ilaa kan ugu fudud e-baaskiil. Caadi ahaan, duubista baaskiiladaha korantada ama mootooyinka wadada waxaa ka mid ah baaskiilka elektaroonigga ah, iyo baaskiil koronto koronto dufan leh ayaa ka tirsan kan ugu culus e-baaskiilka, laakiin mootada ayaa baabi'in doonta dareenkan culus markii la wado baaskiil. Miisaanka u dhexeeya 20 ilaa 28kgs ayaa ku habboon.
Qodobkani sidoo kale lama iska indho tiri karo. Runtii, waa inaad taas ka ogaataa. Waxaa jira xaddidaad xaddiga xawaaraha baaskiilka korontada ee waddamada qaarkood Tusaale ahaan, Waddamada Midowga Yurub xawaaraha ugu badan kama badnaan karo 25km / saacaddii. Haddii aad si dhab ah uga fiirsato xawaaraha sida ikhtiyaar ahaan, markaa laga yaabee in miisaaniyadda la kordhiyo ayaa ku caawin doonta. Xawaaraha ugu sarreeya ayaa ka sarreeya, qiimaha baaskiil koronto ka sarreeya. Badanaa, xawaaraha celceliska sida 25-35km / saacaddii, kaas oo aamin ah kuna habboon safarka. Qof ahaan, qodobka ugu muhiimsan ee doorta baaskiil koronto ayaa fududeynaya raacitaankooda meelaha jiingada ah mana ahan xawaaraha.
Dadka qaarkiis waxay u maleynayaan in baaskiilada elektaroonigga ah ee raqiiska ah aysan lahayn farqi weyn oo ka yimaada korantada-dhamaadka sare korantada tayada. Si kastaba ha noqotee, taasi waa cuqdad. Xusid ahaan, tayada ebike waxay leeyihiin xoogaa xiriir ah oo qiimo leh. Marka la eego tiknoolajiyada nidaamka xakamaynta elektarooniga ah, qalabka, qaybaha iyo waxyaabo kale oo badan, waxay ku kala duwan yihiin tayada taayirka, bareegyada disc, batteriga, adeegga dammaanadda, ECT.
Haddii aad xiisaynayso baaskiil wadista oo aad rabto inaad wax dheeraad ah ka ogaato, waad baari kartaa qormooyin hore ama booqo annaga Websiteka rasmiga ah, sidoo kale dooro inaad ka tagto fariintaada hoosta.
* Nooca isticmaalaha: Soo -dejiye/Dukaanle OEM / ODM Qaybiyaha Custom/Tafaariiqda E-commerce
Tags:mootooyinka mooto baaskiil mooto koronto
Ka hor: Faa'iidooyinka iibsashada bushkuleetiga mootada korontada ku shaqeeya
Next: Bandhigga Carwada ee 128-aad waxaa lagu qabanayaa internetka bisha Oktoobar
mootada cusub ee korontada 48V 750W laba matoor
Sida loo hagaajiyo silsiladda baaskiilka korontada
Mootada korontada 48v 500w 13Ah 10Ah batari lithium laga saari karo D1